Ukuguqula idatha yendawo kwi-intanethi! - Geofumed
Ukutshintsha data lomhlaba Ngaba intanethi!
MyGeodata yinkonzo ye-intanethi emangalisayo apho kunokwenzeka ukuguqula idatha ye-geospatial, nge-CAD eyahlukeneyo, i-GIS kunye neefomati zeRaster, kwiinkqubo ezahlukeneyo kunye nenkqubo yesetyenzisiweyo.
Ukwenza oku, vele ulayishe ifayile, okanye ubonise i-URL apho igcinwa khona. Iifayile zinokulayishwa enye enye, okanye icinezelwe kwi-ZIP, i-RAR, i-7Z, i-TAR, i-GZ, i-BZ2, i-LZ, i-Z, i-ARJ, i-CAB, phakathi kwabanye.
Inkonzo isekela ngaphezu kweefomathi ze-60 kunye ne-100 raster. Kwimeko ye CAD / GIS ungalayisha ezi fomathi zilandelayo:
Ixabiso leKhethiweyo eyahlukileyo (.csv)
I-Czech RU Exchange Exchange Format
I-Czech Cadastral Exchange Format
OpenStreetMap XML kunye nePBF
I-Arc / Info Binary Coverage
Arc / Info .E00 (ASCII) Umyinge
Ubalo lwabantu base-US TIGER / Line
I-OGDI Vectors (VPF, VMAP, DCW)
Ifayile yeDatabase yeGeomatics Geomatics
I-X-Plane / Flightgear idatha ye-aeronautical
Ukulahla kwe-PostgreSQL yeSQL
Ifomathi yokuTshintshiselwa kweeHrographic
Iifayile zeAeronav FAA
I-Arc / Yenza Ulwazi
Ifom ye MS Excel
Vula iWindows Spreadsheet
MS Office Open XML ispredishithi
Ukugcina kunye neEXchange Ifom
Emva kokuba idatha ilayishiwe, iqonga linombonisi nge-OpenStreetmap ngasemva, apho ulwazi olulayishiwe luboniswa khona.
Ngezantsi, unokuqwalasela iimpawu zenguqu, njengokuguqula i-datum okanye ukulungelelanisa inkqubo. Njengomzekelo, sinemininingwane kwi-WGS84 kwaye sifuna ukudlulisela kwi-ITRF91, i-SRS entsha.
Unokukhetha ukwenziwa komfanekiso, okwenziwe kakuhle ekusebenziseni izibhengezo, iileta ñ okanye iimpawu zezinye iilwimi. Emva koko unokhetha iindawo esithemba kuzo.
Emva koko iziphumo zingaveliswa kwezi fomathi:
Iifom zeVector Formats
Ixabiso leKhethiweyo eyahlukileyo
Standard SOSI yesiNorway
Ekugqibeleni, ifayili inokukhishwa.
Le nkonzo ifumaneka simahla, kunye ifayile yomzobo ubungakanani ukuya 20 100 MB kunye MB eyi, kodwa ngokwenza iminikelo yokuzithandela Ungasusa ezi izithintelo kunye nokukwazi ukuba abagcine igcinwe.
Le yonke uluhlu lweenguqu eziguqukayo:
Post edlulileyo«Edlulileyo I-20 Isinyathelo sokwakha isixeko ukususela ekuqaleni
Post Next I-Fuga del Chapo Guzmán, umsebenzi wobunjineli obuphezuluOkulandelayo "